Ogaden News Agency (ONA) – 21ka Janaayo Waa Maalin Xusuus u Leh Umadda Somaliyeed iyo Ciidanka Cirka ee RAF
21ka Janaayo Waa Maalin Xusuus u Leh Umadda Somaliyeed iyo Ciidanka Cirka ee RAF
Posted by ONA Admin	/ January 21, 2015
Dhamaadkii sanadkii 1919 ayay Xukuumaddii Boqortooyada Ingriiska wafdi ka socda Xoghayaha Mustacmaradaha Ingriiska usoo dirtay Waqooyiga Somaliya oo la odhan jiray British Somaliland. Wafdigii wuxuu ku taliyay in aan Sayidka iyo Ciidankiisa Daraawiish laga adkaan karin ilaa ugu yaraan laba Guuto (Division) loo diro halkaa, taasoo ku kalifi doonta qasnada boqortooyada dhowr Milyan oo Gini. Kharash aad u badan ayuu noqday oo waagaa aanay dawladii Ingriiska diyaar u ahayn inay ku bixiso British Somaliland. Xoghayahii Mustacmaraadka (Colonial secretary) Lord Milner wuxuu u jeedsaday dhanka Ciidanka Cirka RAF oo waayadaa la asaasay inay arintan xal u raadiyaan. Taliyihii Ciidanka Cirka oo la odhan jiray Sir Hugh Trenchard oo aad u doonayay inuu aqoonsi u helo ciidankiisa cirka si looga dhigo ciidan madaxbanaan ayaa durbadiiba yidhi, arintan waxaa masuuliyadeeda qaadaya ciidamada cirka ee RAF. Markii lagu yidhi, ciidan dhulka ahna kama maarantid, wuxuu ku jawaabay waxaa igu filan ciidanka jooga halkaa.
Shir lagu falanqaynayo ololahaa ayaa la qabtay oo ay kasoo qaybgaleen Winston Churchill oo ahaa wasiirka dagaalka iyo saraakiil sare oo ka socota qaybaha kala duwan ee ciidamada. Saraakiishii saree ciidamada waxay aad uga soo horjeedsadeen in ciidamadoda loo kaxeeyo dhankaa maadaama meela badan oo caalamka ah ay ku baahsanaayeen oo Dagaalkii Koobaad ee Aduunka uu goorahaa dhamaaday. Hasa ahaatee taliyihii ciidanka cirka RAF ayaa yidhi; sinaba uma dalbanayno ciidamo dheeraad ah. kolkaa ayaa loo ogolaaday inay qaadaan dagaalka.
Ciidanka Cirka ee lagu magacaabo –Z Force- oo Masar saldhigoodu ahaa ayaa la faray inay u dhaqaaqaan SL. 12 dayaarad oo nooca DH.9A ayaa lagu qaaday markab oo laga dajiyay Berbera. Waxaa kaloo laga dajiyay toban gawaadhida dagaalka ee Ford, lix treelar, laba mooto iyo laba gawaadhida yaryary ah. Waxaa la socday 36 sarkaal oo uu ku jiro taliyihii Z Force iyo Abaan-duulihiisii, 183 askari oo ku biiray ciidankii loo yaqiinay Camel corbs ee horey u joogay halkaa.
1dii Janaayo (1st January) ayay guryaha loo dhiso dayaaradaha (aerodrome) ka qotomiyeen Berbera, halkaasoo ay ka dhigteen saldhigga ay kaga duulayaan Daraawiish. Waxay dagaalkii ugu horeeyay ku qaadeen qalcadii Jidbaali 21kii Janaayo.
Waxay qoreen duuliyayaashii waday dayaaradaha in ciidamadii Daraawiishta oon waligood arag wax duulaya inay aad u argagxeen oy kala carareen, oy buuraha galeen. Waxay kaloo sheegeen in qaraacidaa ay ku duli gaareen Sayid Maxamad oo bamkii ay ku tuureen uu ku dhacay neef geela ah oo si lama filaan ah usoo maray meel agtiisa ah. Shan maalmood gudahood ciidankii cirka ee Z Force waxay ka burburiyeen Daraawiishta oon haysanin wax ay isaga celiyaan dayaaradaha 3ex Qalcadood, ka dibna waxay bilaabeen inay dusha ka hagaan oy ka hogaamiyaan cidiankii dhulka ee Camel Corps-ka. 28kii Janaayo ayuu Ingriiska qabsaday Jidbaale, iyadoo Siyadka iyo ciidankiisi ay dib ugu xaruntii Taleex. Bishii ku xigtay ee Fabaraayo 9keedii ayay qabsadeen ciidankii Ingriiska xaruntii taleex ka dib markay dayaaradihii ku burburiyeen Qalcadii taleex ee xarunta u ahayd Sayidka. Khasaare laxaadle ayaa daraawiisha kasoo gaadhay dagaalkaa. Ciidankii Daraawiish oo uu Sayidka lasocdo ayaa dhanka Ogadenya u gurtay halkaasoo uu abaabul iyo dibu habayn ka bilaabay, hasa ahaatee dhamaadkii sanadkii ee December ayuu cudurka duumada u geeriyooday Sayid Maxamad Cabdille Xassan.
Laga bilaabo taariikhdaa waxaa la aqoonsaday Xeesha Dagaal ee ah in Dagaalka Cirka marka ugu horeysa lagu qaado goobaha cadawga, ka dibna ay galaan ciidanka dhulka. Waxayna ku heleen Ciidankii Cirka ee Ingriiska (RAF) aqoonsigii ay raadinayeen oo waxau noqdeen ciidan sidooda u taagan kana madaxbanaan qaybaha kalee ciidamada.
Baarlamaanka Ingriiska ayaa markuu maqlay geerida Sayidka aad ugu riyaaqay, waxayna dalbadeen in la keeno maydkiisa dalka Ingriiska oo maxkamad lagu saaro, taasoo ay dadkii ogaa xabaashiisa markay maqleen inuu Ingriiska soo raadiyay intay ka saareen goor habeen ah ayay waxay ku aaseen meel aanay kuwii soo qaaday qudhooda garanaynin si midkoodii la qabto aanu ugu hogaaminin.
Allaha U Naxariistee Sayida Maxamad Cabdille Xassan wuxuu tiriyay markii laga qabsaday xarunta gabay aad u dheer oo loogu magacdaray Dardaaran, oo kuwii la socday gaalada ee caqli xumada ay u gaysay inay jabkiisa ku digtaan uu ku leeyahay bal aan ogaano intaad iga dambaysaan;
Ragga haatan igu diimayow, duxi ha kaa raacdo
Halkan ka Dhagayso Gabayga Dardaaran: